मार्ग बन्द जीपीएस नेभिगेशन छ - UPDATED
प्रश्न मार्ग बन्द जीपीएस नेभिगेशन छ - UPDATED
2 वर्ष3महिना पहिले -2वर्ष 1 महिना पहिले #521 by Gh0stRider203
म यसलाई यहाँ हाल एक बिट प्राय यस गरिरहेको गर्नुपर्छ याद गर्नुभएको छ। 2017 अघि कहिल्यै गरे ......
तपाईं म LFRG, भनेर उत्तर गर्न DFW मा, मानिन्छ लिइरहेको छु गर्न सकिन्छ त केवल यो उत्तर, मेरो ट्रयाक, र त्यसपछि मेरो वर्तमान ट्रयाक ट्रयाकको देख्न सक्छौं।
म यो गर्छ किन हानि छु। कहिलेकाहीं यो उचित ट्रयाक फिर्ता र निस्कने पूर्ण धेरै पटक उड छौं, र त्यसपछि पटक यो होइन जस्तो छ त्यहाँ! नहीं यो गरिरहेको .....
DFW मेरो अवतरण नजिकै सिद्ध थियो। सही डट, र -.37 फिट / Touchdown मा सेकेन्ड को एक वंश दरमा (अगाडि जान .... डाह हुन योग्य)
जो कोहीले केहि पायो?
अन्तिम सम्पादन:2वर्ष 1 महिना पहिले Gh0stRider203.
2 वर्ष3महिना पहिले #524 by Dariussssss
खैर, तपाईं केहि गडबड।
तपाईं मार्ग सन्दर्भमा केहि, पछि लाग्न बन्द Tinker गर्नुभयो? म च तपाईं गरे, FSX गज्याङ्गुजुङ् सम्पूर्ण उडान योजना हुनेछ, र एकदम अक्सर पहिलो तरिका-बिन्दु फिर्ता विमान ल्याउन। वा, जीपीएस / एफएमसी सट्टा HDG मोडमा स्विच गर्नुहोस्। म जाँच र डबल त्यहाँ कुनै त्रुटिहरू वा केही पागल पालैपालो वा यो जस्तै केहि छ सुनिश्चित गर्न मार्ग जाँच किन हो।
2 वर्ष3महिना पहिले #526 by Gh0stRider203
lol होइन। कारण मैले गन्तव्य रहेको आईएफआर गर्न र बिन्दुमा म आईएफआर गर्न VFR देखि स्विच जबसम्म कुरा परिवर्तन छैन, म टावर संग सम्पर्क पहिले नै छु।
म बस्न र यी लामो उडानहरू समयमा FSX मा ताक छैन। म (lol जो म अब दायाँ गरिरहेको छु) यस्तो Warships को प्ले विश्व रूपमा, अन्य सामान के
2 वर्ष3महिना पहिले #527 by Dariussssss
... म 'को तालाब भन्दा' 'उडानहरू केही' थियो, वास्तवमा एक धेरै लामो KPHX-LYBE र विमान यसलाई सही जहाँ हुनुपर्छ, स्थान मा थियो। म एकैचोटि सम्पूर्ण उडान गर्न सक्षम थिएन, त्यसैले म केही भागहरु मा गरे। केही बिन्दुमा सुरक्षित र जब म केही समय समातेर जारी राखे। म भने जस्तै, यो ठाउँ मै थियो।
यसलाई तिमी मलाई त्यो उडान योजना पठाउन सम्भव छ? (प्लान वा ई-मेल) म यसलाई गर्न प्रयास गर्नेछ। जो विमान तपाईं यो मा उपयोग गर्दै छन्?
2 वर्ष3महिना पहिले #528 by Gh0stRider203
सामान्यतया यो समस्या छैन ......
म KDFW के - कारण यसलाई अधिकतम दायरा, एक एकदम सजिलो दृष्टिकोण नजिक छ भन्ने तथ्यलाई गर्न 747-400LCF मा LFRG (जब तपाईं रनवे 12 lol प्राप्त), र फलस्वरूप, म यो उडान संग VA लागि सबैभन्दा पैसा बनाउन ।
म प्रयोग3योजना एक जिप फाइल संलग्न गर्नुभएको छ।
KDFW - LFRG रनवे 12 गर्न रनवे 30 र 30 र आईएफआर गर्न VFR
फाइल नाम: KDFW-LFRG.zip
फाइल साइज:2KB
2 वर्ष3महिना पहिले #529 by Dariussssss
ठिक छ। म एक सामान्य 747ERF संग, यो अलि फरक हुनेछ।
यो VFR मा यस्तो उडान गर्न मलाई एकदम अनौठो छ ... शायद कि हो जहाँ त्रुटि हो ... खैर, म यसलाई प्रयास हुनेछ।
2 वर्ष3महिना पहिले #531 by Gh0stRider203
मेरो उडानहरू को 99.999% VFR र KDFW छन् - LFRG म संग यो समस्या मात्र मार्ग हो। म आईएफआर रुचि छैन। म बस gonna ले-बन्द पछि जसरी रद्द गर्दा के, VFR मौसममा आईएफआर गरिरहेको मा बिन्दु छ मतलब?
2 वर्ष3महिना पहिले #532 by Dariussssss
मेरो उडानहरू को 99.999%, हो आईएफआर ATC यसलाई नरक रूपमा कष्टप्रद छ तापनि, तर म यसलाई सकेसम्म व्यावहारिक राख्न मेरो सबैभन्दा गर्छन्।
त्यसैले त राम्रो टाढा विमान ट्रयाक मा सही छ।
2 वर्ष3महिना पहिले #533 by Gh0stRider203
म त्यसो हुनेछ .... तर म सुत्न मन म तपाईंलाई घण्टा थप्न दिनेछौँ
म यति किन उड गर्छन्? राम्रो एक लागि .... यो के म अप्रिल मा हालसम्म गर्नुभएको छ।
दोश्रो, म मात्र एक VA लागि अहिले उडान छु, र वर्तमान हाम्रो खर्च 961,250 PAX चरा लागि $2पट्टे भुक्तानी एक महिना (दुवै हो एक 777-200LR), र $ 1,258,3342FREIGHTERS लागि एक महिना (747 छन् -800F)।
यसलाई हामी ढाक्न प्रत्येक महिना पर्याप्त मा ल्याउन र तिनीहरूलाई भुक्तानी गर्न बन्द आवश्यक $ बनाउन निश्चित सम्म मलाई गर्न छ।
2 वर्ष3महिना पहिले -2वर्ष3महिना पहिले #534 by Gh0stRider203
म गत महिना बस 300K एनएम भन्दा गरे, र परमेश्वरको कति घण्टा थाह lol
यो तपाईं को लागि gonna कार्य अप छैन शायद छ। यसलाई सधैं मेरो लागि यो गर्दैन। यसलाई पूर्ण रूपमा अनियमित छ